Global Voices teny Malagasy · Vero – Jona 2018
Vero · Jona, 2018
Nanomboka nandika tamin'ny 03 Desambra 2017 · 62 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Vero tamin'ny Jona, 2018
Azia Atsimo26 Jona 2018
Azia Atsinanana20 Jona 2018
Voajirika ilay tranonkala lehibe indrindra fanaovana lavanty ao Korea, "Auction", tamin'ny volana Febroary ary very tamin'izany ny mombamomban'ny mpanjifa miisa 11 tapitrisa farahakeliny. Tsy ela akory izay, fantatra fa Shinoa ireo mpijirika.
Naniry Ny Hampiray Ireo Firenena Roa i Sabika Sheikh, Ilay Mpianatra Pakistaney Maty Tamin'ny Fitifirana Tany Amin'ny Sekoly Amerikana
Azia Atsimo19 Jona 2018
..hoy izy...'tia hianatra ny kolontsaina amerikana aho ary tiako i Amerikà mba hianatra ny momba ny kolontsain'i Pakistàna ary mba tiako isika raha hiray hina sy hiaraka.' hoy ny tsiaron'ilay reny nampiantrano azy
Costa Rica: Marary Iray Mitantara Ny Fiainany Manoloanan'ny Homamiadana
Amerika Latina06 Jona 2018
Vao nahafantatra fa tratry ny homamiadana ny bilaogera iray avy ao Costa Rica, dia nanapaka hevitra ny hizara teo amin'ny bilaogy ny tantaran'ny adiny tamin'ilay aretina
Fifidianana Filohampirenena ao Etazonia: Mbola Hery Mavesatra Ao Amerika Ve Ny Fankahalana Sy Ny Fampitahorana?
Amerika Avaratra02 Jona 2018
.Mainty, Silamo ary Tsy tia Amerikana. Ireo, raha tena izy, no niantsoana an'i Barack Obama, ilay Demokraty mpifaninana ho filoha, tamin'ny andro faramparany teo. Misy loza mandondona an'i Obama ve ary mbola hery mavesatra ao Amerika ve ny fankahalana sy ny tahotra?